Social Media ဆိုတာဘာလဲ။ ကုမ္ပဏီများအဘယ်ကြောင့်ဂရုပြုသင့်သနည်း။
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 26, 2015 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာများ၏ B2C နှင့် B2B စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများစွာရှိနေသည်။ နှင့်အတူ attribution အတွက်အခက်အခဲကြောင့်ကအများကြီး downplayed ဖြစ်ပါတယ် analyticsသို့သော်လူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းချက်များကိုသုတေသနပြုရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်လူမှုကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုနေကြောင်းသံသယမရှိပါ။ ငါ့ကိုမယုံဘူးလား အခု Facebook ကိုသွားပါ။ လူမှုရေးထောက်ခံချက်တောင်းခံသူတွေကိုရှာပါ။ ငါနေ့တိုင်းနီးပါးသူတို့ကိုကြည့်ပါ။ တကယ်တော့, စားသုံးသူလူမှုရေးမီဒီယာရည်ညွှန်းအပေါ်အခြေခံပြီးဝယ်ယူရန် 71% ပိုများပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူမှုမီဒီယာ၏ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူ B2B အဖွဲ့အစည်းများစွာသည်၎င်းသည်ပေးနိုင်သည့်တန်ဖိုးအမှန်ကိုသဘောပေါက်လာသည်။ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုသင်၏ ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏လူမှုရေးမီဒီယာကိုသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေးလိမ့်မည်။ စတီဖင်တမ်လင်၊ ဥရောပမှခွဲထွက်ခြင်း
သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သည့်လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာ ၄ တွင်အကောင်အထည်ဖော်သင့်သနည်း။
နားထောင်နေသည် - အွန်လိုင်းပေါ်ရှိအလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားတုံ့ပြန်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်၎င်းတို့နှင့်ယုံကြည်ရသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်မယုံနိုင်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သင့်အားတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းကိုသာကန့်သတ်မထားပါနှင့်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏အမည်များ၊ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမည်များကိုဖော်ပြခြင်းအတွက်နားထောင်သင့်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအရောင်းနှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေကြားရန်၊ သင်၏အွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင်ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်သောကုမ္ပဏီအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းသင်၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားယုံကြည်မှုရှိစေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ စျေးကွက်သမား ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် #Twitter တွင်ဖောက်သည်များဝယ်ယူကြသည်
သင်ယူ - စီးပွားရေးပိုင်ရှင် ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့၏ဝယ်ယူသူများကို #Facebook တွင်တွေ့ရှိပြီးစီးပွားရေးပိုင်ရှင် ၄၃% သည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို #LinkedIn တွင်တွေ့ကြသည်။ ထိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ၊ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်များနားထောင်ခြင်းကိုသင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိအဓိကပြissuesနာများအကြောင်းပြောဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားထိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရေရှည်မဟာဗျူဟာများဖော်ထုတ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ပါဝငျ - စကားပြောသောအခါသို့မဟုတ်အရောင်းအခွင့်အလမ်းများရှိသည့်အခါ၌သာစကားပြောဆိုလျှင် - သင်သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားကိုဆိုရှယ်မီဒီယာအားပေးမည်ကိုမေ့နေသည်။ ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကို curating နှင့်သင်၏အလားအလာများနှင့်စိတ် ၀ င်စားသောဆောင်းပါးများကိုမျှဝေခြင်းသည်၎င်းတို့နှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခြင်းသည်သူတို့၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေလိမ့်မည်။
မြှင့်တင် - သင်၏လက်လှမ်းမီမှု၊ ကွန်ယက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအားမြှင့်တင်ခြင်းသည်မျှတသောလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မြှင့်တင်ချင်တာအမြဲမလိုချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းမဖယ်ရှားသင့်ဘူး။ အရောင်းဝန်ထမ်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် Social Media ကြောင့်အရောင်းအ ၀ ယ်နှစ်ခုမှငါးခုကိုပိတ်ထား
Tags: 2015 လူမှုမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း statsစီးပွားရေးလူမှုမီဒီယာဆုံးဖြတ်ချက်များဝယ်ယူgoogle plus ကိုစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအတွက် google +လူမှုရေးမီဒီယာကမင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုကူညီမလဲလူမှုမီဒီယာကစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုကူညီသလဲစီးပွားရေးအတွက်လိပ်စာရောင်းအားပိတ်လူတွေကိုရောင်းစီးပွားရေးအတွက်လူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလူမှုရေးအရောင်းလူမှုရေးအရောင်းအစီးပွားရေးအတွက် twitter
ဒီဇင်ဘာ 1, 2015 မှာ 12: 09 AM
Amazing article Douglas! These tips you have given must be applied when advertising your business online. Posting is not enough. Listening to your audience and engaging with them is important so that you will be able to know their interests. If you know their interest, you will be able to identify your targeted customers. Most marketers haveasuccessful business because of the customers that they have found through social media. Thank you for this very informative post!
ဒီဇင်ဘာ 17, 2015 မှာ 1: 37 AM
Definitely will execute these things. I mean, I’ve been using social media as part of my marketing campaign and with the right strategies for it, so far, it’s been doing great for the business. But I don’t limit myself so this post of yours can really help mealot to do better in this kind of strategy.